Fahaizana mamaky sy manoratra - Wikipedia
Fahaizana mamaky sy manoratra
Ny fahaizana mamaky sy manoratra dia ny fahafahana mampiasa fiteny an-tsoratra. Amin'izao fotoana izao, ny «fahaizana mamaky sy manoratra» dia fahaizana mifehy ny fanisana, ny fanoratana, ny famakiana ary fahalalana ny dikan'ny sary amin'ny kolontsaina iray. Ao amin'ny firenena mandroson'ny OCDE, dia aitatra amin'ny fahaizana mifehy teknolojia ary fahaizana manadihady zava-misy sarotra ny fahaizana mamaky sy manoratra.
tsy fahaizana mamaky sy manoratra araka ny firenena
Ao Afrika sy ao Sahara no tena manana tahan-tsifahaizana mamaky sy manoratra eto amin'izao tontolo izaio. Ao amin'ireo firenena ireo dia telopolo isan-jaton'ny lehilahy ary efapolo hatramin'ny dimampolo isan-jaton'ny vehivavy n tsy mahay mamaky na manoratra, araka ny famaritana napetraky ny FM (Firenena Mikambana). Anisan'ny mahatondra ny tsifahaizana mamaky sy manoratra ny tsi filàn'ny olona izany fahaizana izany amin'ny fiainany mandavanandro. Ao koa ny anjaran'ny kolontsina, toy ny kolontsaina izay manana fomban-drazana am-bava. Ny foko izay miaina amin'ny fiompiana omby izao ohata dia mety tsy mila mahay mamaky teny sy manoratra.
1.1 Fiavian'ny fahaizana manoratra
1.2 Fiavian'ny abidy
1.3 Fahaiza-manoratra erak'izao tontolo izao
2 Fahaiza-manoratra amin'ny taonjato faha-21
3 Fiantraika ara-toe-karena
5 Ezaka tahirim-bokim-bahoaka hampiroboroboana ny fahaiza-manoratra
Fiavian'ny fahaizana manoratraHanova
Ny fahaiza-manoratra dia nivoaka tamin'ny fivoaran'ny fahaiza-manisa ary ny fitaovam-panisana izay efa nipoitra tamin'ny taonarivo fahavalo talohan'i J.K. Nipoitra in-efatra tao Mezôpôtamia, Ejipta, Amerika Afovoanya ry Sina ny soratra.
Tany Somera no nahitana ny fifandraisana an-tsoratra anisan'ny voalohan'ny indrindra, izay natao valo arivo taona taloha'ni J.K. Tamin'izany fotoana izany, ny fahaiza-manoratra dia raharaha ilaina amin'ny fitantanana fahalalana vaovao ary karazam-pitantanana nambarin'ny fifanakalozana ary ny famokarana amin'ny ambaratonga lehibe.
Fahaiza-manoratra erak'izao tontolo izaoHanova
Fahaiza-manoratra amin'ny taonjato faha-21Hanova
Ezaka tahirim-bokim-bahoaka hampiroboroboana ny fahaiza-manoratraHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahaizana_mamaky_sy_manoratra&oldid=702634"
Dernière modification le 13 Janoary 2015, à 21:01
Voaova farany tamin'ny 13 Janoary 2015 amin'ny 21:01 ity pejy ity.